काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले कालापानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालीको गौरव बढाए तापनि कुटनीतिमा कमजोरी भएकाले नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको आरोप लगाएका छन्। राजधानीमा आयोजित साक्षत्कारमा प्रधानले भने, ‘चीन र भारतबीच नेपाल ‘नेचुरल बोडर’का रुपमा रहेको छ, दुवै देशलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने नीतिले मात्र हाम्रो हित गर्छ।’
उनले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग अधिकतम फाइदा हासिल गर्नेगरि सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको सेनाले सीमामा त्यति चासो नलिएको उनले बताए। प्रधानले भने, ‘हाम्रो सेनाको प्रयोग र सबभन्दा बढी सदुपयोग भनेको न युएन पिसकिपिङमा मात्रै हो, नेपालको सीमामा सेनाले त्यति चासो दिएको छैन। त्यहाँ प्यारामिट्री फोर्स र सशस्त्र प्रहरी बस्छ। सेना डाइरेक्ट जानु पनि हुँदैन। युद्धै भएको अवस्थामा मात्रै जाने हो। नेपालले युद्धको अवस्था ल्याउन दिनु पनि हुँदैन। सुगौली सन्धिमा हामीले धेरै गुमायौँ नि। हाम्रो रणनीति भनेको नै भारत र चीनलाई विश्वासमा लिएर नै नेपालको हितमा सम्बन्ध उपयोग गर्ने हो। नेपालले एक अर्का विरुद्ध प्रयोग गर्नुहुँदैन। नेपालले आफ्नो हितमा काम गर्नुपर्छ।’
नेकपाभित्रको विवादबारे संकेतमा नेता प्रधानले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो म्याण्डेटअनुसार चल्न दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्षलाई निर्बाध रूपमा चलाउन दिनुपर्छ। अहिले सबै पार्टीमा समस्या छ। हारेपछि हार्नेले पनि भाग खोज्ने प्रवृत्ति देखियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मूल्यांकन पाँच वर्ष पछि हुने हो। हुन त यो सरकारले केही पनि गरेको छैन। देशमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ, उसको शासन छ, यो शासनमा मजदुर जनताको हित गर्ने हो नि। तर, खोइ कहाँ उनीहरूको हित भएको छ ? दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खानेहरू कसरी बाँच्छ ? सरकारले हेर्नुपर्दैन ? यो सरकारसँग कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्।’
उनले आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद पार्टी अधिवेशनको लागि भएको सुनाए। उनले भने, ‘हाम्रो लडाइँ त इस्युमा हो। केपी ओलीले युवाहरूलाई नेतृत्व दिने भनेका छन्। मैले पनि युवा साथीहरूलाई नेतृत्व लिन तयार हुनुपर्छ भन्दै आएको छु, हाम्रै पार्टी युवा नेताहरूलाई लड्न भनेको छु। युवाहरूले आँट गरेका छैन। म त बिचमा छु। ७० पुगेको छैन, ६० वर्ष नाघिसकेँ। अर्को कुरा सभापति उठ्न क्रेज पनि चाहियो नि।’